मोरङमा ओली रक्षात्मक, कुन नेता कता ? | जनदिशा
मोरङमा ओली रक्षात्मक, कुन नेता कता ?
चन्द्रगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै नेकपामा आएको फुट मोरङ जिल्लामा पनि प्रष्ट देखिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र)बीच एकता हुँदा मोरङ जिल्लाले १० जना केन्द्रीय सदस्य पाएको थियो। जसमध्ये आठ जना प्रचण्ड-नेपाल समूहमा खुलेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जम्मा दुईजना मात्र देखिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू गुरु बराल र विनोद ढकाल ओली समूहमा लागेका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य सावित्रिकुमार काफ्ले, घनेन्द्र बस्नेत, महेश रेग्मी, शिवकुमार मण्डल, गोपीबहादुर अछामी, जीवन घिमिरे, लालबाबु पण्डित र देउमान सम्वाहाम्फे प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका छन् ।
ओली पक्षका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले पदबाट यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए । ओली समूहमा रहेका सम्वाहाम्फेले पनि संसद् विघटनपछि कित्ता परिवर्तन गरेर प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका हुन् ।
२०६ सदस्यीय नेकपा मोरङको जिल्ला कमिटीमा पूर्व माओवादीका नेता एवं नेकपाका जिल्ला सचिव गणेश उप्रेती ‘सुशील’सहित एक सय १४ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको रेग्मीले दाबी गरे ।
प्रचण्ड– माधव समूहको दावीअनुसार जिल्ला कमिटीभित्र ओली समूहमा ९२ जना मात्रै छन् । ओली समूहले पनि जिल्ला अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलसहित बहुमत सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरिरहेको छ ।
जिल्ला कमिटीकै मान्यता पाएको विराटनगर महानगर कमिटी एक सय ४६ सदस्यीय थियो । सचिव हेम कार्कीसहित ८९ जना दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । ओली समूहमा ५७ जना छन् ।
तर, ओली समूहमा रहेका महानगर अध्यक्ष सागर थापाले आफूसहित बहुमत सदस्य आफ्नोमा रहेको दाबी गरे । नेकपाका मोरङ इन्चार्ज घनेन्द्र बस्नेत र विराटनगर इन्चार्ज शिवकुमार मण्डल प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा पनि ओलीपक्ष अल्पमतमा परेको समाचार यसअघिनै सार्वजनिक भएको थियो।
Previous Previous post: घरबासले फेरियो जीवन
Next Next post: विराटनगरको श्रम कार्यालय तोडफोड